Baro + Baadhitaan - GO! SPECTRUM SCHOOL
spectrum School > koorsooyinka our > Baro + Dabagal
Waxaa soo raaca Waxbarashada Dalton waxaad heleysaa toddobaadle 3 Saacadaha ZAP.
ZAP micnaheedu waa "barashada is-maamulidda maadooyinka guud ". Waxaad la shaqeysaa qorsheeyayaasha waxbarasho. Adiga ayaa go'aansanaya (jajabinta) oo loo qabanayo hawlaha aad rabto inaad shaqeyso. Waxaad mawduuca si toos ah u maareyneysaa oo aad dooran kartaa haddii aad keligaa sameyso ama aad la socoto ardayda kale. Macallinka waa "Su'aalaha isboortiga" iyo kormeeraha.
ka Waxbarashada Dalton waa nooc waxbarashada ah oo xooga saaraya xorriyadda doorashada ee ardayga, la shaqeynta ardayda kale iyo horumarka madaxbannaanida. > Faahfaahin dheeraad ah
Waqtigaas, saacadaha ZAP waxaa lagu rakibay kaliya A-stream.
WAXBARASHO + saacado
Waxaad heleysaa taageero laqabatimay inta lagu jiro "WAXBARASHO +"
waxbarashada + wuxuu baranayaa jawi waxbarasho oo adag oo leh taageero iyo hagid iyada oo loo eegayo baahida iyo xiisaha kala duwan ee arday kasta.
> A-stream: Marka laga soo tago casharrada guud ee aad hesho inta lagu guda jiro "WAXBARASHADA + SAACADAHA" Tilmaame-baraha sida waafaqsan su'aalahaaga iyo baahiyahaaga.
> B-socodka: Inta lagu jiro tiro barasho + saacado ayaad ka heli kartaa ADI-habka fursada ah inaad wax ka qabatid maadadaada.
Waxaan bixinaa "HORUMAR + + daqiiqad dheeraad ah" oo ah qaabka casharrada shaqo-guri ee Arbacada subaxdii loogu talagalay A-stream iyo B-stream.
Mashaariic mashruuc ku dhisan
Koorasyo ​​badan ayaa lagu bixiyaa mashruuc.
Waxaad ku baraneysaa sheekooyinka xiisaha leh "VOICE" en "ART iyo dhaqanka".
Iyada oo la ADI-habka waxaan ka shaqayn doonnaa inta lagu jiro casharrada si ardayda oo idil ay fursad u helaan inay wax ka qabtaan mowqifkooda.
La-qabashada awoodaada inta lagu jiro QALABKA TALLAALKA en MODULES
Inta lagu jiro kulannadayada "Awoodda Awooda" iyo modules waxaanu raadinaynaa talooyinkaaga iyo xiisahaaga. Waxan ku sameeynaa su'aalaha: Bal yaan ahay anigu? Maxaad Waxaan doonayaa? oo waxaan maxaad samaynaysaan?
Sannad-dugsiyeed kasta waxaad dooran kartaa inta u dhaxaysa dhowr nooc oo kala duwan oo ikhtiyaari ah oo aad raadinayso awoodaada. Waxaad raacdaa qaybaha xulashada 2 xilli kasta muddada 1 ee usbuuca (saacadaha 4).
(eray / sawir / riwaayad)
Dhagax iyo biyo
Sannadka kowaad oo dhan ardaydu waxay helayaan mid "ROCK iyo WATER training".
Ardaydu waxay bartaan inay naftooda si fiican u bartaan si isboorti iyo firfircoon. Waxay bartaan sida ay isula dhexgalaan oo ay u tababaraan bogsoontooda.
Warbixin dheeraad ah? Nagala soo xiriir!